Ankizivavy maro no maniry hanao taokanto mba ho fotsy ny rantsan-tànany, saingy tsy hain'izy ireo hoe ohatrinona ny vidin'ny fanaovana hoho, ka matetika izy ireo no mahatsapa fa voafitak'ilay manicurist aorian'ny nanaovany ny haza. Ity ny salan'isa antonony ny kanto misy ifandraisany amin'ny referansao. Amin'ny ankapobeny, ny vidin'ny vokatra ...
Ilay angano kely izay matetika manao zava-kanton'ny fantsika amin'ny vokatra poloney dia tokony ho fantany fa isaky ny ampiharina amin'ny gel ny hoho dia mila hafanaina sy hamafisina ao anaty jiro fanaovana mofo izy, ka fantatrao ve hoe inona ireo toro-hevitra amin'ny fampandehanana ny poloney ao an-trano nefa tsy manendy jiro? Amin'ny ankapobeny, fantsika s ...
Manicure mahafinaritra, manikotra lamaody dia manintona loatra, mandroso ary afaka manatsara ny isa avy hatrany
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 21-01-30
Mba hahatonga ny tananao ho tsara tarehy kokoa, eto zarao ny fomba fanao amin'ny fantsika amin'ny alàlan'ny fampiasana vokatra fantsika poloney novokarin'ny hatsaran-tarehy miloko vaovao, manantena fa tianao izy ireo: Na inona na inona endrika tsotra na endrika sarotra, tsy mifantoka amin'ny isan'ny haingo, fa ny antsipiriany. Fantsika tsotra ...
Nail UV gel poloney poloney loko miloko izao dia azo raisina ho toy ny fandidiana mahazatra any amin'ny salon hoho. Tamin'ny voalohany dia nozaraina ho fantsika kristaly sy hoho phototherapy ny ankamaroan'ireo hoho, fa ankehitriny dia tsy fahita firy ireo fantsika kristaly. Ny fantsika Phototherapy dia mila haondrahan'ny hazavana ultraviolet aorian'ny fampiharana pho ...
Inona no maha samy hafa ny poleta fantsika mora vidy sy lafo?
Ao amin'ny tontolon'ny poloney gel, misy loko isan-karazany, raikipohy, fitsaboana ambony ary vidiny. Fa inona no mahasamihafa ny poloney fantsika UV mora vidy amin'ny fivarotam-panafody sy rongony $ 50 tavoahangy misy marika any amin'ny fivarotana lehibe, sy ny salon mainstream sy ny poloney UV tsy miankina ...
Momba ny poloney gel, ataovy tsara tarehy sy matoky tena kokoa ny tovovavy
Nail poloney poloney, dia be mpampiasa amin'ny indostrian'ny fantsika tato anatin'ny taona vitsivitsy. Noho ny toetra mampiavaka ny fantsika poloney raha oharina amin'ny poloney amin'ny fantsika mahazatra, ny poleta Ruran Chemical dia milamina amin'ny tontolo iainana, tsy misy poizina, salama ary azo antoka. Ankoatr'izay, mifanaraka amin'ny tombony iraisan'ny rehetra ...
Orinasa an'arivony mifandraika amin'ny fantsika no mitombo amin'ity taona ity any Shina
amin'ny alàlan'ny admin amin'ny 20-10-25
Ny tatitra iray mitondra ny lohateny hoe "Masks may Make the" Lipstick Index "Die" navoaka vao haingana tao amin'ny tranokalan'ny gazety US "Fortune" dia nanambara fa teo ambanin'ny valan'aretina, ny "Lipstick Index" dia mety hanana fomba hafa vaovao - ny "effet poles de gel." Araka ny t ...
Tsy nahomby tampoka ilay "effets lipstick"! Nahoana no lasa mpandresy lehibe indrindra ny indostria poloney?
Isaky ny miditra amin'ny dingana ambany ny fivoarana ara-toekarena dia hisy hatrany ny olona manonona ny "effet lipstick." Amin'ny maha entana tsy ilaina azy amin'ny vidiny ambany, amin'ny fotoana miavaka izay ahatonga ny tsirairay amin'ny kitapom-bolany sy handany vola am-pitandremana, ny "lokomena" dia tsy vitan'ny ...
Nanjary iray amin'ireo indostria manambina indrindra ny indostrian'ny poleta nika aorian'ny valan'aretina:
Tsy nampoizina, ny indostria izay nibolisatra indrindra taorian'ny valan'aretina dia ny art nail - Poloney gel, toy ny polony miloko, gel base / top, polygel, gel builder, gel hosodoko, maso saka, gel emboss, gel vita amin'ny gel ary poloney sns. Rehefa saron-tava izy ireo, vehivavy maro no mametraka ...